TOAMASINA : MPANAO GAZETY 20 MIANADAHY NIOFANA MOMBA NY FIKIRAKIRANA NY MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEYS NA NY MICS 2018
On nov 12, 2019 10 217
Miankina amin’ny valin’ny fanadihadihana havoakan’ny antontan’isa no hamaritan’ny mpitondra ny fandaharanasany sy ny laharam-pahamehana tokony hatolotra ny mponina ao aminy.
Mba ahafahana maneho izany, nanatanteraka fiofanana fanamafisam-pahaizana ho an’ny mpanao gazety miisa 20 avy amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara ny Unicef. Notanterahina tany Toamasina izany ny faha-efatra hatramin’ny fahavalo novambra 2019.
Nizara roa ny fampiofanana: Andaniny ny fomba ahafahan’ny mpanao gazety mikirakira ny valin’ny fanadihadihana Multiple Indicator Cluster Surveys na ny MICS. Tompon’andraikitra tamin’ny fampiofanana ny avy amin’ny Sampandraharaham-pirenena misahana ny antontan’isa na ny INSTAT anjara tamin’ny fampiofanana. Ankilany, ny fomba hanampian’ny mpanao gazety ireo mpiantsehatra amin’ny ady hatao ho fiarovana ny ankizy amin’ny fampiasana ny Internet. Niandraikitra izay ny avy amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana, ny sampandraharaha misahana ny cyber-criminalité ary ny Minisiteran’ny mponina ( MPPSPF).
« Tanjona amin’ny fampiofanana tahaka izao ny mba hahafehezan’ny mpanao gazety ny fikirakirana ny antontan’isa izay mivoaka. Zava-dehibe ny fahaizany mampita izany amin’ny mpamaky na ny mpihaino sy ny mpijery.», ho Ramananjato Ranto, tomponandraikitra ny antontan’isa sy fanadihadihana eo anivon’ny UNICEF.
Marihina fa nahatratra 23, ny valin’ny fanadihadihana MICS Madagasikara 2018 novoamboasana nandritra ny roa andro voalohany, nanaovana ny fampiofanana. Anisan’izany ny antotan’isa mahakasika fihetsiky ny zaza, ny fananan’ny zaza kopia, ny tsy fahampian-tsakafo, ny fampiasana ankizy tsy ampy taona.
Mbola betsaka ny ezaka ho an’ny vehivavy
Misongadina anatin’ny MICS 2018, ny herisetra sy olana mianjady amin’ny vehivavy sy ny Ankizivavy. Voalaza ao anatin’ny fanadihadihana, mbola sera iray ilam-bahaolana ny momba ny fahasalamana, ny zo, ny toekarena, ny fanabeazana, ny fampandrosoana ary indrindra ny zon’olombelona.
Matetika, olona akaiky na olona ao anatin’ny fianakaviana ihany no manao ny herisetra amin’ny vehivavy na ny ankizivavy, herisetra izay hita fa mahazo vahana eran-tany.
14% ny vehivavy 15-49 taona, niharan’ny fanolanana nandritra ny androm-piainany. 32% kosa niharan’ny vono nanomboka ny faha-15 taonany.
Miovaova isaky ny faritra ny fiseho sy ny tahan’ny herisetra. Ohatra maromaro ny ompa sy teny marary miaro fanambaniana, manginy fotsiny ny vono.
Mikasika ny ompa, lohalaharana ny any amin’ny Faritra Betsiboka sy Sofia 45% ny taham-pisiany. Manaraka ny eto Analamanga 43% sy Bongolava, izay mahatratra 42%.
Raha ny fikasihan-tanana indray, loha-lisitra ny eto Analamanga 39% sy Alaotra Mangoro 34%, ary Itasy izay mahatratra 31%.
Momba ny fanolanana : Anosy 21% ; Itasy 19% ; Analamanga 18%
Raha fintinina dia vehivavy 1 amin’ny 4 no niharan’ny herisem-badiny na olona akaiky azy. Tao anatin’ny 12 volana mialohan’ny fanadihadihana, nahatratra 12% ny vehivavy niharan’ny fikasihan-tanana. Matetika eny amin’ny tanandehibe no tena handrenesana fitarainana amin’ny herisetra mahazo ny vehivavy. Tsy mifidy mari-pahaizana io, voakasik’izany na ny vehivavy nandia-fianarana lavitra aza.
Marihina fa nanatontosa ny MICS-MADAGASIKARA 2018 ny avy ao amin’ny INSTAT. Tetikasa novatsian’ny UNICEF, sy ny Banky iraisam-pirenena, ary ny USAID Madagascar vola.
GAEFY: MANATANTERAKA NY HETSIKA « SAKAFO NY FIDERANA » ANIO
CYBER CAFÉ AMIS DES ENFANTS: MIARO NY ANKIZY AMIN’NY TAMBAJOTRAN-TSERASERA